Zaridaina Royal Botanic any Peradeniya ~ Journey-Assist - sary maro be
Pejy fandraisana » Eran-tany / Faritra » Asia » Sri Lanka » Fampahavian'i Sri Lanka » Zaridaina Botanika Royal any Peradeniya
Zaridaina Royal Botanical Peradeniya, Kandy
Zaridaina Botanika Royal any Peradeniya, Kandy
Ny Royal Botanic Gardens any Peradeniya no lehibe sy tsara indrindra ary malaza indrindra amin'ny zaridaina botanika rehetra any Sri Lanka. Ny tantarany dia nanomboka tamin'ny 1747.
Ny zaridaina botanika tsara indrindra any Sri Lanka
Inona no mahaliana ao (sary marobe)
Ahoana ny fomba hidiran'ny Kololevsky Botanical Garden any Peradeniya
Weather in Botanical Garden ankehitriny + ramena
Royal Botanic Garden amin'ny sarintany
Ny haben'ny zaridaina dia 60 ha. Nangoniny karazana zavamaniry sesitany be dia be - mihoatra ny 4 000 karazana. Ao anatin'izy ireo dia misy ny hazo, ny ahitra, ny voninkazo, ary ny zava-manitra. Ny karazan-javamaniry tsirairay dia asiana takelaka misaraka. Eo am-baravarana ihany koa izy ireo dia manome torolàlana miloko marobe amin'ny teny anglisy, izay manondro ireo faritry ny Royal Botanical Garden sy ny endriny. Misy karazan-tany miisa 30 eto eto. Anisan'izany ny orkide, palma mpanjaka, zava-manitra ary maro hafa. sns .. Ireo fizarana ao anaty zaridaina ao amin'ny torolàlana voamarika isa hatramin'ny 1 ka hatramin'ny 30.
Torolàlana mankany amin'ny zaridaina Botanika (zaridaina zaridaina)
Drafitry ny zaridainan'ny Botanic Royal ao Peradenia. (mpitari-dalana)
Amin'ireo karazan-javamaniry marobe voangona eto, maro no karazana tsy fahita firy. Ny iray amin'ireo zavamaniry mahaliana indrindra amin'ity toerana ity dia hazo banyan goavambe. Ny fihanaky ny epiphytika dia mihantona amin'ny sampany eny amin'ny tany ary be ahitra.
Hazo Banyan goavambe eo amin'ny Royal Botanic Garden
Lahatsary ofisialy Royal Botanic Garden
Inona no mahaliana ao amin'ny Royal Botanic Garden (sary maro)
Orchids ao amin'ny zaridainam-botaka Peradeniya, Kandy
Ny zaridaina orkide sy ny zaridaina manitra dia hita eo amin'ny sisiny ankavanan'ny fidirana. Ity farany dia manitra misy fofona avy amin'ny vanille, dipoavatra ary cardamom. Ho fanampin'ny fanangonana orkide mahavariana, voavoly isan-karazany, hazo palma ary zavamaniry mafana hafa dia angonina amin'ny fanombohan'ny zaridaina (akaikin'ny vavahady lehibe).
Ny aviavy japoney, indray mandeha avy any atsinanan'i India, no nibodo faritra 1 600 metatra tora-droa. m, sy ny fakany lehibe, izay mivoaka avy amin'ny tany mandritra ny metatra maromaro, indraindray dia endrika hafahafa.
Zaridaina manitra any Kandy Royal Botanic Garden, Peradeniya
Palm Alley eo amin'ny zaridainan'ny Botanic Royal of Peradeniya
Ny cordilina atsimo, izay nentina avy tany Amerika Atsimo tamin'ny taona 1905 dia manome endrika mahavariana ihany koa.Ny fandehanana teny amin'ny felaka alimo, izay natsangana tamin'ny taona 1885, dia afaka mahita amboadia manidina maro ianao eo amin'ny hazo.
Manidina eny amin'ny Kandy Royal Botanic Garden
Alley Fahatsiarovana (Alley afovoan-tanimbolin'ny Royal Botanic)
Alley Fahatsiarovana ao amin'ny Royal Botanic Garden any Sri Lanka
Ny foibe afovoan'ny zaridaina dia antsoina hoe Alley's Memory. Eto dia nisy hazo samy hafa namboly olona niavaka avy amin'ny firenena rehetra. Anisan'ireny i Indira Gandhi, Harold Macmillan, Broz Tito, ary isan'ireo Rosiana - Nikolai II sy Yuri Gagarin. Mampalahelo fa maty teo ambadiky ny tenany ny hazon'ny astronaut voalohany. Fa ny hain'ny amperora farany an'i Rosia dia mbola velona mandraka androany.
Ny Alley of Memory dia voahodidin'ny bozaka sy trano be dia be, tranobe, tranobe misy fehezin'ny 8, conservatory, fombres, hazo akondro avy any Chine, Japon ary Cambodia,
Zavamaniry goavambe ao amin'ny zaridainan'ny mpanjaka Botanic
ary koa ny voninkazo misy voninkazo izay maniry, ny chrysanthemums, hibiscus, crotons, bougainvilleas maro loko sy voninkazo maro hafa.
Voninkazo any amin'ny Zaridainan'ny Botanical Peradeniya
Alika iray hafa dia manana ny anarana hoe "Cannonball". Ny hazo kurupit Guanian dia maniry eo (ny anarana faharoa amin'ity zava-maniry ity dia hazo cannonball).
Mifangaro amin'ny voaloboka izy ireo, voankazo boribory be dia be mihantona amin'izy ireo. Ny voninkazo Kurupite dia mampiavaka ny firafiny tany am-boalohany.
Voninkazo Kururpita (Couroupita guianensis) any Peradeniya
Talipot Hazo Oliva mahafinaritra ao amin'ny zaridainan'i Peradeniya
Anisan'ireo zavamaniry mahaliana hafa, ny Talipot dia tsara homarihina. Mijoro amin'ny haben'ny raviny izy. Ny Talipot dia mamony afa-tsy indray mandeha monja, amin'ny faha-40 taonany. Misy voninkazo maro be.
Corypha umbraculifera Talipot Palm. Palm Talipot
Taloha, ravina lehibe amin'ity hazo ity no nampiasaina hanaovana trano lay. Mba hanaovana izany, manambatra fonosana maromaro fotsiny. Ny ravina iray ao Talipot dia lehibe loatra ka afaka miaro hatramin'ny 20 olona avy amin'ny orana.
Ny taratasy mivalona mafy dia vita amin'ny ravina koa.
Farihy afovoan-jaridaina botanika
Farihy ao amin'ny zaridainan'ny Botanic Royal of Peradeniya, Kandy
Ao amin'ny faritra afovoan-jaridaina any Peradeniya dia farihy misy noforonin-java-kanto izay ahafahanao mahita zavamaniry marobe, toy ny lisy rano sy ny zozoro.
Farihin'i Kandy Royal Botanic Garden
Mitombo volotsangana eo akaikiny, ary mahatratra 40 m ny haavony.
Akaikin'ity farihy ity dia rotunda fotsy, namboarina ho fanomezam-boninahitra an'i George Gardener, izay nitantana ilay valan-javaboary tamin'ny taona 1844-49. Botanista iray fanta-daza izy ary nanangona zavamaniry an'arivony maro avy tany Brezila, nitsangatsangana teto amin'ity firenena ity nandritra ny 4 taona.
George Gardener Rotunda
Ankoatr'izay, i Gardener dia nifehy ny fanafarana tany Sri Lanka ny hazo quinine (nampiasaina hamokarana vaksin ny tazomoka) sy ny fingotra.
Rare Seychelles hazo rofia ao an-jaridaina
Zavamaniry iray tsy fahita firy, ny hazo palma Seychelles, maniry amin'ny lalana mankany amin'ny tsangambato Gardener.
Ny mampiavaka azy dia eo am-pahitana fa ny voankazo amin'ity tanana ity dia masira be, ny masony mety mahatratra 20 kg.
Seychelles Palm Nuts (voa)
Ny voankazo amin'ity hazo ity matetika dia manomboka amin'ny faha-8 taonany ary voafaritra amin'ny fahaiza-mamokatra ambony (hatramin'ny 20 ny tsaramaso nalaina avy amin'ny hazo iray).
Karazan-jamaody Japoney amin'ny Royal Botanic Garden
Tao amin'ny zaridaina botanika any Peradeniya dia noforonina fantsom-pianarana Japoney miaraka amin'ny renirano mimenomenona, lantom-bato miloko ary gazebo iray. Ny famolavolana azy dia mampiasa zavamaniry tropikaly izay manahaka ny zavamaniry amin'ny zaridaina iray mahazatra any Japon.
Zavamaniry tamin'ny taonjato maro
Hazo lehibe any Peradeniya
Amin'ny lafiny ankavanan'ny fidirana lehibe, tsy lavitra azy dia ala kely misy hazo, izay samy mihoatra ny 100 taona. Eto ianao dia afaka mahita eucalyptus, cicada, upas, izay efa 140 taona mahery, ary hazo hafa manana haja manaja indrindra.
Hazo antitra taonjato
Sekolin'ny Architecture Tropika akaikin'ny Royal Botanic Garden
Ny faritry ny zaridaina ao Peradeniya dia miodidina ny renirano lehibe indrindra any Sri Lanka - ny Mahaweli. Ny tetezana iray mamakivaky izany dia mampifandray ny zaridaina botanika miaraka amin'ny School of Tropical Architecture. Amin'ity andrim-panjakana ity, ny zava-manitra isan-karazany sy ny zava-maniry hanasitranana.
Manakaiky ny zaridaina ihany koa ny Oniversiten'i Sri Lanka, izay naorina tamin'ny 1942. Voaravaka ny tranokala Kandian taloha ary voahodidina zaridaina lehibe sy ny renirano Mahaweli, izay mamakivaky ny oniversite.
Ahoana ny fomba hidirana any amin'ny Royal Botanic Gardens of Peradnia
Ahoana ny fomba hidiran'ny Royal Botanic Garden
Ny Royal Botanic Gardens dia misy any Peradeniya, faritra akaikin'i Kandy. Ny halaviran'i Kandy sy Peradeniya dia 6 km. Voalohany, mila mahazo any Kandy ianao. Avy any dia tsy sarotra ny mankany Peradeniya.
Mora lavitra noho ny fandalovana an'io Maze Maitso ao amin'ny zaridainan'ny Botanic Royal any Peradeniya 🙂
Mba hanaovana izany, azonao atao ny mampiasa ny fomba fitaterana maromaro:
Ao amin'ny tuk tuk ao amin'ny zaridaina botanika
Mandondona mandondona. Avy any Kandy ka hatrany Peradeniya, ny vidin'ny tuk-tuk dia $ 4 (450 Sri Lankan). Tsy mihoatra ny 30 minitra ny lalana. Tsara kokoa ny maka maka-tuk izay milaza hoe "TAXI-METER" handoa ny halaviran-tany, fa tsy amin'ny fotoana ilana azy (ny vidiny aloha dia mihena). Eny, rehefa mivoaka avy any amin'ny tanàna, anisan'izany Kandy, ny lozam-pifamoivoizana indraindray dia mipoitra. Mampitombo ny fandaniana ny dia izany.
Ny bus. Avy any Kandy ka hatrany amin'ny fijanonana any Peradeniya, izay antsoina hoe zaridaina Botanic (Botanical Garden), laharana bus 644 (mila mankany amin'ny fijanonan'ny Clock Tower any Kandy) ianao, ary koa ny laharana bus 652 (mijanona ao Kandy - Torrington). 20 rupees ny vidin'ny dia. Rehefa mandeha ny fotoana, dia maharitra 20 ka hatramin'ny 40 minitra.
Fitaterana haofa. fijanonana
Manofa fiara na bisikileta. Ny zaridaina ao Peradeniya dia misy eo amin'ny lalam-be A1 mampitohy an'i Kandy mankany Colombo. Misy malalaka ny fijanonana eo akaikin'ny vavahady lehibe mankany amin'ny Royal Garden, ary lehibe ny faritra misy azy, ka matetika dia ampy ny habaka ho an'ny rehetra.
Ny lamasinina. Any amin'ny Central Station any Kandy dia afaka mividy tapakilan'ny lamasinina miala any amin'ity tanàna ity mankany Colombo na mankany Nuwara Eliya, miantso ny biraon'ny fahatongavan'ilay Botanik Garden na Sarasavi-Uyana.
Ity fomba ity dia tsy mahasalama ihany, fa koa ara-toekarena indrindra. Tapakila ho an'ny kilasy kilasy faha-3 ihany no vidiny 5 rupees.
Sarsavi-Uyana Station no laharana faha-3 avy eo amin'i Kandy. Rehefa tonga any izy dia mila mandeha 20 minitra eo amin'ny faritanin'ny University of Peradeniya. Amin'ny ankapobeny, io làlana io dia mitana ny salanisa 1 ora
Royal Botanic Garden vidiny sy ora fanokafana (2019-2020)
Misokatra ho an'ny mpitsidika ny zaridaina. isan'andro amin'ny 7.30 a.m. ka hatramin'ny 18 p.m. (ny tapakila dia amidy hatramin'ny 17.00 p.m.)
Vola hiditra amin'ny olon-dehibe - 2000 rupees (manodidina ny 12 $)
Ho an'ny ankizy - 1000 rupees (manodidina ny 6 $)
Raha te-hijery ilay zaridaina rehetra ilainao 3-4 ora.
Ny fotoana tsara indrindra mitsidika eto dia ny 10 sy 16 ora.
Ny hotely akaikin'ny Peradeniya Botanical Garden
Weather in the Corlevsky Botanical Garden. Azo tanterahina sy lavitra an'izany!
Ampisehoy ny sari-tanety ho an'ny fanamoriana: https: //goo.gl/maps/MHLgechQejrXEML66
Royal Botanic Garden of Peradeniya eo amin'ny sarintany
Ny fijerin'ny Royal Botanic Garden any Peradeniya
Royal Botanic Garden Reviews (Google reviews)
Royal Botanic Garden mijery (Tripadvisor)
Ny zaridaina botanika tsara indrindra hitako hatramin'izay!
tao aminy 2 taona lasa izay, ary mikasa aho izao indray.
ny vidin-javatra, hitako, dia niakatra. rupees 1500 ho an'ny olon-dehibe. ary efa 2000.
Super ny zaridaina. Manoro hevitra aho hitsidika anao.